Alzeria : midera ny herim-pon’ny vahoaka any Tonizia ny any Alzeria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2011 13:15 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, Shqip, Español, বাংলা, srpski, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, Français
Aorian i Tonizia, Alzeria? sary Flickr avy amin i anw-fr, zo mampiasa noho ny CC BY
Noharabain'ny mponina any Alzeria ny hetsika fanoherana nataon'ny vahoaka tany Tonizia nandravana ny fanjakan'i Zine El Abidine Ben Ali [EN] izay nanjaka tokana nandritra ny 23 taona. Any amin'ny resadresaka rehetra, ny bilaogy sy ny facebook, dia tsy hitan'ny vahoaka any Alzeria intsony izay hilazana ny herim-pon'ny vahoaka Toniziana izay nanohitra tao amin'ny fireneny ka nahatonga ny “filohany” handositra.
Ilay mpitoraka bilaogy R.Z, ao amin'ny bilaogy Mots de Tête [FR] no niarahaba manokana ny vahoaka Toniziana [FR] tamin'ny hetsika lehibe nataony. Ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohanteny hoe “Menaka sa fahafahana? Naneho ny safidiny ny Toniziana… “ (lohanteny fihantsiana mifandraika amin'ny fivoaran'ny korontana any Alzeria, izay nahavitan'ny fanjakana nampihena ny fitakian'ny tanora amin'ny hoe fiakaran'ny vidin'ny menaka sy ny siramamy), R.Z nanoratra:
Iza no tsy taitra tamin'izay nitranga tany Tonizia? Ny vahoaka Toniziana, tamin'ny hetsika milamina nataony sy ny fahasahiany dia nahazo fahafahana. Ary ny tena tsara indrindra, nampatahotra an'i Ben Ali ka nanosika azy hiala teo amin'ny fitondrana. Ny tena zavatra ratsy sady nahamenatra ho azy : nandositra ny fireneny izy. mampihomehy, nivoaka teo amin'ny lalana tery teo amin'ny tantara izy. Afaka niala tamin'ny fomba hafa anefa izy, fomba “mendrika”. Kanefa ny hetahetany hifikitra amin'ny fitondrana no nanery azy tsy nahavitany izany. Raha tsorina, tsy antonona ny mpanao didy jadona ny fahamendrehana.
Araka ity mpitoraka bilaogy ity ihany:
Manana ny antony tsy ananan'ny mpitondra ny vahoaka natao tsinontsinona. Hetaheta ho amin'ny fahafahana, ny lalana, izy no nahafantatra ny zavatra rehetra. ny lalana no nahalala fa eny no niatombohan'ny faran'ny mpanao ampihimamba. Eny fa na dia ny mpanohana azy matanjaka indrindra aza, izay tsy iza fa i Sarkozy, tsy nahavonjy azy. Nahafantatra ihany i Ben Ali, fa efa tara loatra. Efa vita ny lamesa.
“Iza no manaraka?” Izany no fanontaniana apetraky ny mpitoraka bilaogy Alzeriana hafa, Fragments, taorian'ny fanambarana ny fialan'i Ben Ali [FR].
Raha voamarina fa nandao tanteraka ny fitondrana i Ben Ali, dia dingana lehibe hamerenana ny fanjakana demokratika any Tonizia izay. Eny fa na dia mbola betsaka aza no amboarina, dia tokony hahafaly ny tsirim-panantenana teraka taorian'ny taona maro nanampenam-bava sy namoretana.
Feheziny amin'ity fanontaniana ity:
Nisy fiantraikany tamin'i ElMouradia (lapam-panjakan'ny filoha Alzeriana) ve ny fandehanan'i Ben Ali tampoka? Raha tsorina, ho avy koa ve ny antsika indray andro any?
Maneho hevitra momba ny fandosiran'ny filoha andrarezina Toniziana [FR], ny mpitoraka bilaogy Alzeriana iray ao amin'ny resadresaka fa tahaka ny “voalavo” i Ben Ali fa tsy tahaka ny filoham-pirenena.
Raha tokony hiala ny sambo ao anatin'ny savorovoro izy, dia naleon'ny filoha teo aloha Ben Ali nanao toy ny voalavo toy izay toy ny kapiteny tena mandray andraikitra ka hizaka ny andraikiny nanao izay nahatafita ny sambony mialohan'ny hialany teo.
Henatra indrindra ho toy ny mpangalatra, mpamono olona… anankiray amin'ireo Arabo sy Afrikana mbola mitovy aminy.
Ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohanteny hoe “Tunisie-Algerie: zavatra mitovy” [EN] navoakany tao amin'ny bilaoginy [FR], ilay mpanoratra Alzeriana Makhlouf Bouaich, miaraka amin'ny fanantenana kely, no mahita fitoviana amin'ireo hetsika roa izay niseho tany Tonizia sy izay niainan'i Alzeria ny ampitson'ny korontana nisiana ra mandriaka tamin'ny oktobra 1988.
Atrehantsika izao ny “fiverenana ho amin'ny fahamarinana” (any Tonizia), “fiverenana ho amin'ny fitoniana”, amin'ny fisamborana tena mendrika, amin'ny famerenana ny natao, ireo tena silamo miverina mahazo laka… Ireo rehetra ireo no hanome, azo antoka, fiatoana kely ho an'ny fanjakana hanamboarany azy tsara. Izany ho etahaka ny taranaka hafa hanorina Alzeria faharoa.